दुर्गम क्षेत्रका विरामीलाई सम्झिएर रोए लोकप्रिय डा. मल्ल (भिडियो) | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home स्थानिय समाचार म्याग्दी समाचार दुर्गम क्षेत्रका विरामीलाई सम्झिएर रोए लोकप्रिय डा. मल्ल (भिडियो)
दुर्गम क्षेत्रका विरामीलाई सम्झिएर रोए लोकप्रिय डा. मल्ल (भिडियो)
२०७४, १७ कार्तिक शुक्रबार २१:४४
शुक्रबार दिउँसोको ४ बजेको समय । म्याग्दीको बेनी अस्पतालको प्राङ्गणमा डा. धिरेन्द्रकुमार मल्लको विदाइको तयारी हुँदै थियो ।
दिउँसो २ बजे कार्यक्रम गर्ने भनिए पनि झण्डै दुई घण्टापछि कार्यक्रम सुरु भयो । कार्यक्रमको सुरुवाती चरणमा अस्पतालमा सेवा प्रदान गर्न आएका नवआगन्तुक डाक्टरहरुलाई स्वागत गरियो ।अनि त्यसपछि अस्पतालको कार्यालय सहयोगी पदमा कार्यरत भीमकुमारी थापालाई पनि विदाइको अबिर, माला र खादा लगाइयो ।
अब पालो आयो डा. धिरेन्द्र मल्लको सम्मान र विदाई थाप्ने । उहाँलाई सुरुमा अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी, जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख डा. रोशन न्यौपाने र निवर्तमान अध्यक्ष चन्द्रकुमार केसीले अस्पतालको तर्फदेखि सम्मानपत्र, धौलागिरि हिमालको फोटो अङ्कित म्याग्दीको चिनो, अस्पतालका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले कोट तथा टोपी, निवर्तमान अध्यक्ष चन्द्रकुमार केसीले उपहारलगायत प्रदान गर्नुभयो ।
यसैगरी उहाँलाई अस्पतालको इन्डोर र इमरजेन्सीमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले पनि मायाको चिनो प्रदान गरी विदाई गरे । त्यस्तै सेवाग्राही यामबहादुर कार्कीले समेत आफ्नो परिवारको उपचारमा महत्वपूर्ण सहयोग पु¥याएको भन्दै केक ल्याएर खुवाउनुभयो । त्यसपछि कार्यक्रममा सहभागी अस्पतालका सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरुको डा. मल्ललाई विदाई गर्न लर्को सुरु भयो ।
अभिनन्दन कार्यक्रम केहीबेरमा सकियो र त्यसपछि कार्यक्रम सञ्चालक भीम आचार्यले मन्तव्य राख्न डा. मल्ललाई बोलाएर माइक्रोफोन दिनुभयो । सुरुमा अलिकति सम्बोधन गर्नुभएका डा. मल्लले सम्बोधन सक्दा नसक्दै उहाँको गला अवरुद्ध भयो र बोल्नै सक्नुभएन । त्यसपछि उहाँले बोली नआएपछि छेउमा बस्नुभएको अर्को एक जनालाई माइक्रोफोन दिनुभयो ।
एकैछिन उँभिएपछि डा. मल्ल नजिकै कुर्सीमा बसेर बोल्न थाल्नुभयो तर बोली भने अन्य दिनको तुलनामा प्रष्ट बाहिर आउन सकेन । उहाँ विस्तारै रुँदै मसिनो स्वरमा बोल्न थाल्नुभयो यतिबेरसम्म सहभागी सबैका आँखा रसाइसकेका थिए ।
उहाँले विदाई मन्तव्यका क्रममा म्याग्दी जिल्लाको दुर्गम मल्कबाङ, लुलाङ जस्ता गाउँगाउँबाट बिरामीहरुले आफूलाई म गाई, गोरु र भैंसी बेचेर उपचार गर्न आउँछु भनेर भनेको सम्झनुभयो ।
तर आफूले बिरामीहरुलाई घरको केही पनि बेच्नुपर्दैन आउनुस, म निःशुल्क उपचार गरिदिन्छु भनेको बताउनुभयो । डा. मल्लले आफू म्याग्दी आउने भएपछि सुरुमा म्याग्दी कस्तो होला भनेर युट्युवमा सर्च गरेर हेरेको जानकारी समेत दिनुभयो । २०७१ साल फागुन महिनामा म्याग्दी आएपछि आफूले सबै परिस्थिति बुझेर उपचार सुरु गरेको उहाँले बताउनुभयो । त्यसक्रममा अस्पतालमा कार्यरत डा. हेमा जोसी, डा. सुधा त्रिपाठीलगायतलाई पनि सम्झिन चाहन्छु भन्नुभयो ।
उहाँ विदाई कार्यक्रममा त्यति धेरै बोल्न सक्नुभएन । लामो समय जिल्लामा बसेर सेवा गरेको हुँदा सबैको नजिक भएकाले छुट्टिएर जाँदा उहाँलाई गाह्रो भएको छ । यसरी म्याग्दीजस्तो दुर्गम क्षेत्रमा आएर पनि उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरी म्याग्देली जनताको तर्फदेखि नागरिक अभिनन्दनसहित सम्मानित भएर विदाई हुने डाक्टरहरुमध्ये डा. मल्ल पहिलो हुनुहुन्छ ।
उहाँ विदाई हुने क्रममा निकै भावुक बन्नुभयो भने अरुलाई पनि भावुक बनाइदिनुभयो । उहाँ बोल्ने क्रममा जब गला अवरुद्ध भयो त्यो यहाँ बसिन्जेल गरेको सेवाको उपलब्धि र आम म्याग्दीवासी जनताको अघाध माया हो भन्ने उहाँको मुहारमा झल्किन्थ्यो । डा. मल्ल जहाँ भए पनि म्याग्दीवासीले सँधै सम्झनेछन् र उहाँको अभाव महशुस गर्नेछन् । डा. मल्ललाई आगामी दिनमा पनि निरन्तर सफलताको शुभकामना ।
Previous articleलोकतान्त्रीक गठबन्धनको भकिम्लीमा आमसभा
Next articleमराङमा माओबादीका गाउँ इञ्चार्ज सहित अगुवा कार्यकर्ता कांग्रेस प्रवेश